महिला पछाडि पर्दासम्म पुरुष अगाडि बढन सक्दैनन् : मन्त्री बराल
अस्मिना पाण्डे/ बुटवल, २३ फागुन। प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री शुदर्सन बरालले राणा शासनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा संघर्षमा महिला सफल हुँदै गएको बताएका छन्। चाहे त्यो यस भन्दा अगाडिका महिला अधिकारका आन्दोलन हुन्, १० वर्ष जनयुद्धहोस् महिलाले राष्ट्रका लागि गरेको योगदानको उच्च मुल्यांकन हुनु पर्ने बताए।
उनले महिलाका मुद्दालाई सकारात्मक र रचनात्मक दिशामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अबको विषय भएको बताए। महिलाभन्ने बित्तीकै समुदायमा विभिन्न तह र तप्का श्रमिक महिलादेखि हाकिम महिलासम्म, गृहणी महिलादेखि देशको नेतृत्व गरिरहेका महिला सबैका समस्या छन्, विभेद छन् तर फोकस गर्नु कहानिर हो त्यहाँ पुग्न खोजिरहेको बताए। महिला पछाडि पर्दासम्म पुरुष अगाडि बढन संभव छैन, उनले भने। समाज अगाडि बढन महिला पुरुष दुबै बराबर रुपमा विकास वकालत गर्नु पर्ने बताउदै राज्यले तोकेका विभिन्न व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नु पर्ने बेला आएको बताए।
१ सय १० औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस २०७६ को अवसरमा आयोजित अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका पदाधिकारीहरुसँग महिला अधिकार विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।कार्यक्रममा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचीव डा. राधा वाग्लेले संविधान बनायाै संविधानले तोकेका विषय कार्यन्वयन भएका छन् की छैनन् भन्दै अब कार्यान्वयनको पाटोमा बहस हुनुपर्ने बताइन्। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न महिला विभेद गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
महिलाको अधिकार र समानताका लागि महिलाको विषयमा बनेका नीति नियम र कानूनको कार्यन्वयन हुनुपर्ने बताइन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमूख गुमादेवि आचार्यले श्रमिक महिलाहरुको कामको मुल्यांकन र अन्य महिलाको पनि कामको मुल्यांकन हुन जरुरी भएको बताइन्। महिलालाई अपमान गर्ने परिपार्टीको अन्त्य गर्नु पर्नेमा जोड दिइन्। कामको प्रकृतिको आधारमा कोहि माथि पनि विभेद हुन नहुने बताइन्।
नेपालका महिलाहरुले विभिन्न आन्दोलन गरेर आज सामाजिक परिवर्तन भएको हो, उनले भनिन्। अहिले नेपाली महिला पाइला-पाइला गरि शिखर चुम्न पनि सफल भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरिन्। अद्योगिक क्षेत्रका महिला र कृषि क्षेत्रका महिलालाइ हेर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउदै उनले भनिन् गृहणी महिला, श्रमिक महिलालाई पनि सँगै राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्।
महिलाको विकास बिना मुलुकको विकास असम्भव भएको भन्दै तिनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। व्यवस्था त परिवर्तन गर्न सक्याै मनस्थिति परिवर्तन सक्यौं कि सकेनाै भन्ने प्रश्न गरिन्। महिलाका विषय महिलाले मात्रै उठान गर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि कायमै रहेको भन्दै लैङगिक उत्तदायी बजेट सबै किसीमका नागरिकका लागि हो तर बुझाइमा महिलाका लागि मात्रै भएको आचार्यले बताइन्। नेपाली महिलाहरुले घरेलु हिंसाका घटना बाहिर ल्याउनु पर्ने बताइन्। निर्णायक तहमा भएका महिलाको पनि कत्तिको भनाइ लागू गरेका छन् या छैनन् त्यो बुझ्नु पर्ने उनले बताइन्।
अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल प्रदेश ५ का संयोजक नारायणी शर्माले अब निर्णायक तहमा महिलाको पहुँच कार्यान्वयनमा महिलाको नेतृत्व गर्ने बेला आएको बताइन्। हिजो प्राप्त गरेका उपलब्धी संस्थागत गर्न महिला एकता आवश्यक रहेको बताउदै राज्यले पनि महिलाको विकाशमा हातेमालो गर्नुपर्ने बताइन्। कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचीव डा. गोपिकृण्ण खनालको अध्यक्षता, सामाजिक महाशाखा प्रमूख शारदा बस्यालको स्वागत, सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको अभिभावकत्व, मन्त्रालयका सामाजिक शाखा अधिकृत संजय ज्ञवालीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो।